Amazon: chii icho uye ndeipi nyaya iri kumashure kwayo | ECommerce nhau
Amazon SL (kushoma kudyidzana) iri kambani inotangira kuUSA, musika wayo mukuru i e-commerce pamwe chete necomputer services.
Iwo mahofisi aro makuru ari seattle guta mudunhu reU.S. Washington. Amazon yaive imwe yeiyo kutanga makambani kupa uye kutengesa zvinhu painternet pamwero mukuru uye chirevo chacho ndechekuti "Kubva A kuenda Z" (Kubva A kusvika Z)
Iyo yakwanisa kumisikidza yakazvimiririra mawebhusaiti kumisika zhinji mairi iripo kutenderera pasirese senge
Nenzira iyi, iyi kambani inokwanisa ipa izvo zvigadzirwa zveimwe yeaya nyika. Mune dzimwe nyika maAmazon aripowo, inoita mabasa ekutsigira tekinoroji, senge Kosita Rika, sezvo iripo kubva kupi inosimbisa kutarisisa kwayo kune vatengi muLatin America yese kuve imwe yemakambani makuru munyika ino ine vashandi vasingasviki zviuru zvinomwe nemazana mashanu evashandi.
Amazon ndiyo yepasirese kambani yekutengesa pamhepo, kwaunogona kuwana chero chaunoda nekuti zvine chokwadi chekuti pane munhu ari kuzvitengesa.
Iyo Amazon kambani yakavambwa muna 1994 naJeff Bezos mushure mekusiya basa rake rekare semutevedzeri wemutungamiriri weDE Shaw & Co mugore rimwe chete, iyo kambani yaive hombe Wall Street yakasimba.
Mushure mekusiya basa, Bezos akafunga kutamira kuSeattle uye ndipo paakatanga kuronga chirongwa chebhizinesi chakasarudzika kuburikidza neInternet, iyo nekufamba kwenguva yakava izvo isu tese zvino tinoziva sekambani yeAmazon.com.
1 Iyo pfungwa yeAmazon yakazvarwa sei
2 Mhando dzakasiyana dzemazita pamberi peAmazon
2.1 Nei maAmazon?
3 Chinyorwa cheAmazon
4 Nguva uye Yekutanga bhizinesi modhi
5 Nhamba dzebhizimisi itsva
6 Mhosva dzematare
7 Uye nhasi Amazon
Iyo pfungwa yeAmazon yakazvarwa sei
Muvambi weAmazon, ari weWall Street mukati, mushure mekuverenga chirevo icho vakaongorora internet musika uye ramangwana rayo, akawana kuti yaifungidzirwa kukura kwegore rega kwe2.300% muwebhu commerce.
Mushure mekuziva izvi, akafunga kuumba diki runyorwa rwezvigadzirwa zvaaifunga kuti zvaizotengeswa nekukurumidza uye nyore kwazvo paakashambadzirwa kuburikidza neinternet nezvaakawana runyorwa rwezvigadzirwa makumi maviri chete asi yanga ichiri runyorwa rurefu saka akaramba achishanda pazviri kuti zvideredze 5 zvinogoneka zvinobudirira zvigadzirwa zvebhizinesi izvo zvaaitsvaga.
Mukupedzisira, mushure mekutsvaga kwakakwana uye kusarudzwa, akafunga kuti bhizimusi rakaringana rezvakange zvichitsvaga raizove mabhuku nekuti kudiwa kwemabhuku pasirese kwaive kwakakura.
Iyi sarudzo yaive yekubudirira kwakazara nekutenda kumitengo yakaderera yemabhuku ayo yaakapa yakawedzera kune hombe kuwanda kwemazita ezvekunyora ayo aive nawo mudura
Chitoro cheAmazon chakakwanisa kuwana budiriro yakadaro zvekuti mumwedzi miviri yekutanga yehupenyu. Bhizinesi rakatengeswa kune nyika dzinopfuura makumi mana neshanu siyana kusanganisira United States. Kutengesa kwake kwaisvika kumadhora zviuru makumi maviri pasvondo.
Mhando dzakasiyana dzemazita pamberi peAmazon
Chinhu chinonakidza ndechekuti Amazon haina kunyatso kudaidzwa izvozvo kubva kwayakatangira, aive nemazita akati wandei nekuda kwezvikonzero zvakasiyana Jeff Bezos asati asvika pane iyo isu tese yatinoziva tisingazeze nhasi.
Bezos paakagadzira kambani mu1994, akaigadzira pasi pezita re "cadaver"Asi aifanirwa kushandura zita iri mushure mekunge gweta ravhiringidzika ne" chitunha ", mugore rimwe chete iroro, akawana iro dura re URL"Yaremless.com"Saka kambani iyi yaive nenguva refu (kwete rinopfuura gore) zita iri pamhepo asi shamwari dzavakavamba dzakamugonesa kuti zita rakadai rakanga risingakodzere kana kupeperesa kukambani yake sezvainzwika, , akatadza kudaro Bezos, achitora izwi kubva muduramazwi, akasarudza kusarudza zita rekuti Amazon.
Jeff Bezos akasarudza iri zita nekuti iro Amazonas inzvimbo hombe, inoshamisa uye yakasiyana kwazvo kune izvo zvinozivikanwa kumunhu uye aida kuti chitoro chake chikwanise rondedzero iyi zvakare, rwizi rukuru pasi rose rwizi rweAmazon uye aida kuti chitoro chake chive chikuru online chitoro pasi rese.
Kubva munaJune 19, 2000, iyo logo yeAmazon yanga yave kana kuve yakaratidzwa neshoko zvakanyanya museve wakakombama unoratidzika kunge kunyemwerera kukuru, Mutsetse uyu unopindirana nemavara maviri chaiwo: "a" uye "z", anomiririra zvakakwana mumufananidzo uye pasina equivocation, chirevo chayo, icho chinoda kureva kuti chitoro chine zvese zvaungatsvage kubva ku "a" Ku "z"
Nguva uye Yekutanga bhizinesi modhi
Sezvatagara tataura, Amazon yakagadzirwa mugore ra1994, mu Washington nyika, Iyo kambani anotengesa bhuku rake rekutanga muna 1995, Pakazosvika Gumiguru 1995, Amazon yakaziviswa kuruzhinji.
En 1996, zvinotemwa kuti zvibatanidzwe zvakare muDelaware.
Amazon inotanga kupa kwayo kwekutanga kuruzhinji kwezvikamu musi waMay 15, 1997 uye apo vaitengesa pasi peNASDAQ ticker AMZN, stock yekambani panguva iyoyo yaitengesa nemutengo we $ 18 pachikamu chimwe nechimwe.
Iyo bhizinesi chirongwa iyo Amazon yakasarudza kuenda kwayiri pakutanga yaive isina kujairika uye isingatarisirwe. Kambani iyi yaisatarisira kuita purofiti kusvika makore mana kana mashanu gare gare, uye nekuda kwerudzi urwu rwekukura "kunonoka", vagovani vakatanga kugunun'una kuti kambani yakanga isiri kusvika purofiti nekukasira zvakakwana kuti iratidze kudyara kwayo uye kunyangwe haina kukodzera yekugara kwenguva refu.
Amazon yakapona pakutanga kwezana ramakore uye matambudziko ese akamiririrwa, achikura kuita webhusaiti hombe mukutengesa kwepamhepo.
Pakupedzisira yakaita purofiti yayo yekutanga mukota yechina ya2001 Aive madhora mashanu mamirioni, zvichireva kuti mutengo wemari yaive 5 muzana, nemari inowanikwa kudarika $ 1 bhiriyoni.
Apo ichi chidiki asi chinokurudzira muganho wemubhadharo wakatanga kuoneka, zvakaratidza kune vanokakavara kuti Jeff's isingabvumirane bhizinesi modhi inogona kufanofungidzirwa kubudirira.
For the gore 1999, Magazini yeTime yakaziva Jeff Bezos semunhu wegore, nekudaro vachiona kubudirira kukuru kwekambani.
Nhamba dzebhizimisi itsva
Asi Amazon.com haina kumbogadzirisa modhi yayakawana, saka yakazivisa musi waGumiguru 11, 2016 hurongwa hwayo hwekuvaka zvitoro-uye-zvivakwa zvitoro uye kuvandudza curbside yekuunganidza nzvimbo dzechikafu.
Iyi nyowani bhizinesi modhi yakadaidzwa "Amazon Go"(Amazon kuenda), yakavhurwa vashandi veAmazon muSeattle mu2016.
Uyu chitoro chitsva inovimba nekushandiswa kwema sensors akasiyana siyana uye inokwanisa kurongedza otomatiki account yeAmazon pavanobuda muchitoro, hapana mitsara yekutarisa.
Kunyangwe zvakatora nguva yakareba, chitoro chakazovhurirwa veruzhinji muna Ndira 22, 2018.
Asi hazvisi zvese zvaive zvakapusa sezvazvinoratidzika, paive nezvimwe zviitiko zvakaita saBarnes & Noble kumhan'arira Amazon musi waMay 12, 1997, akataura kuti zvataurwa neAmazon "Chitoro chikuru kwazvo munyika" kwaive kunyepa, mumhan'ari akati: «Haisi chitoro chemabhuku zvachose, ibhuku mumiririri ».
Ipapo yaive nguva ye Walmart akamhan'arira Amazon muna Gumiguru 16, 1998, Boka iri rakapomera kuti Amazon yakanga yabira zvakavanzika zvekutengeserana sezvo yakanga yapa vashandi vekare veWalmart.
Matambudziko ese ari maviri akagadziriswa ne misha kunze kwedare.
Uye nhasi Amazon
Ndicho inotonhorera uye inoita bhizinesi modhi, kuti akazadzisa Makore makumi maviri ekuberekwa musi waMay 15, 2017 kubvira payakatanga kutengeserana paNasdaq.
El Mutengo weAmazon unofungidzirwa kuti wave pedyo ne $ 460.000 bhiriyoni.
Amazon yevatengi base yakagadziriswa mukati memakore gumi kubva 2000 kusvika 2010 inosvika makumi matatu emamiriyoni vanhu.
Amazon.com inozivikanwa nekuve nzvimbo yekutengesa zvakanyanya nemhando yemari yekutengesa.
Mari yeAmazon.com inouya kubva pakubhadharisa muzana yemutengo wekutengesa wese wechinhu chimwe nechimwe chinoiswa uye chinopihwa mukati mewebsite yako.
Amazon parizvino inobvumidza makambani kushambadza zvigadzirwa zvavo nekubhadhara mari yavo kuti inyorwe sezvigadzirwa.
Amazon zvakare ine yavo:
Internet Movie Dhatabhesi (IMDb)
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi Amazon?
Francisco Rodriguez akadaro
Makorokoto, ndinoshuva dai isu tese taive isu vatengesi senge iwe
Pindura kuna Francisco rodriguez
Tomas Sanchez akadaro
Ndinoona zvichinakidza .kuti vanobudirira vanoti .unogona kutenga masheya .kukosha kwechikamu chimwe nechimwe chii.
Pindura kuna Tomas Sánchez
Elmis ladeus akadaro
Yakanaka kwazvo kuti kambani isangofumura zvairi kuita chete asi nekundikana kwayo, izvo zvinopa kuvimbika. Makorokoto
Pindura kuna Elmis Ladeus
Alicia murwi akadaro
Makorokoto echokwadi neBezos uye vese vanoona vezvemabhizimusi vanotora mukana. Iwo muenzaniso wakajeka wekuti kuda isimba kana rimwe rikashanda. Zvikomborero
Pindura kuna Alicia Guerrero
Maite Sosa akadaro
Yese nyaya yakanaka kwazvo ASI ndaive neruzivo rwusingafadzi nezve chikumbiro chebasa cheDSP uye ndinonzwa kuti zvese manyepo akachena. Ini ndakapinda mumakwikwi uye havana kundigamuchira uye kusvikira nhasi ini ndakamirira tsananguro yakanyorwa uye hapana. Ini ndinonzwa kuti kuno kuSpain avo vanoita sarudzo HAVAKADZIDZISWA VANHU VANOFANIRA Havana kujeka panguva yekusarudzwa uye kunyangwe tsananguro uye hapana mhinduro inodiwa. Ini ndinonzwa kuti icho chinotsausa Chipo. Ini ndinonzwa KUSODZWA mwoyo uye ndinovimba muridzi weamazon anogona kuverenga izvi uye kutora matanho uye kuisa vanhu vanokwanisa pabasa iri. Pano kana iwe usina mumwe munhu mukati meamazon weSpain, uchipotsa mikana yekuve DSP. Akanyadziswa kwazvo nevanhu veAmazon Spain. Ivo vanofanirwa kuita kugadzirisa patsva. Ndatenda
Pindura Maite Sosa
Ngirozi H. Bonilla P. akadaro
Ndakagara ndanzwa nezve AMAZON, uye ndiri kufarira kutora chikamu.
Pindura kuna Angel H. Bonilla P.
Macarena Lopez Buiza akadaro
"Chinese" pakona yemugwagwa wangu, muSEVILLA, dzosera zvinhu zvako kana zvaputswa. AMAZON inobvuma kuti chigadzirwa chakasvika chakatyoka, asi chinotarisira kuti iwe BHADHARA mari yekutumira ZVAKAITIKA. Ini handifadzwe neYankees. NDINOBvumidza CHEMA CHEMA. CHUNGOS chaizvo CHUNGOS. Hunhu, Kubudirira uye Kubudirira hachisi chinhu chako.
Pindura Macarena López Buiza